Ukukhetha indawo yomsebenzi ibhizinisi elizimele. Namuhla, ukuze ukwazi kahle ukuthi kufanelekile ukuxhumana nalokhu noma lokho okuqinile, kuwumkhuba wokufunda imibono yabasebenzi ngakho. Uhlobo luni lomsebenzi "abasebenzi" ababuyekezwayo "Letual"? Akuyona imfihlo ukuthi lesi yisikhathi esingabaphoqelela abasebenzi abasha ukuba bangene enkampanini. Ngakho-ke, ake masinyane sizame ukuthola wonke ama-nuances wokusebenza nawe, nokuqonda imibono yomqashi.
Into yokuqala okufanele uyiqaphele yinkampani yenkampani. Ngempela, kuye ngokuthi, inkampani izobheka abasebenzi abathile ngomsebenzi. Esimweni sethu, sisebenzelana nenethiwekhi ethandwayo yokuthengisa ehambisa amafutha nezimonyo eRussia.
I-Lethual "impendulo yempampani enkampanini ngokwemisebenzi yayo ithola ngokumangalisayo nje. Phela, le nethiwekhi ithengisa ngempela izimonyo namafutha wezinto ezahlukene. Lapha ungathola lutho, kusuka ipensela emehlweni akho kuya powder professional noma shampoo. Into esemqoka ukubeka umgomo. Kodwa ingabe leli ndawo lihle ngokuqondene nomsebenzi? Yiziphi izici okufanele zicatshangelwe? Yini okufanele ubekezelele?
Ake siqale ngeqiniso lokuthi umsebenzi ku-"Latual" ukubuyekezwa kwabasebenzi kakade esiteji senkulumo. Futhi nangu kunjalo, ngokungavamile, kuhle kakhulu. Kwamanye amazwe, isigaba sokuqala somsebenzi singagqanyiswa isimo sengqondo sokuzikhukhumeza nokungenangqondo. Kodwa amacala anjalo ajwayelekile kakhulu.
Njengoba abasebenzi beqinisekisa, kufanele nje ufike kunoma yikuphi isitolo "Letual" futhi ukhulume ngomsebenzi nomphathi oyinhloko. Ngezinye izikhathi uzocelwa ukuba ugcwalise ifomu lesicelo endaweni, bese ulinda impendulo.
Kodwa kunezimo lapho umenyelwa ehhovisi lenkampani ukuthola umsebenzi. Lapho, imenenja yokuqasha iyoqhuba ingxoxo enobungane nawe, funda ukuqhubeka kabusha (ngezinye izikhathi ayitholakali kubantu nhlobo - akunandaba), futhi izonikezela ukugcwalisa ifomu lesicelo. Akukho okuyinkimbinkimbi, akunjalo? Ngemuva kwalokho, kungakapheli usuku uzobizwa futhi utshelwe uma ufanelekile noma cha.
Izithuba nokukhula komsebenzi
Zisebenze kubasebenzi ababuyekezwa "i-Letual" bemvelo ehlanganisiwe etholakalayo izithuba ezihlongozwayo namathemba emisebenzi. Into yukuthi lapha ukuthi abalindi bokuphepha nabaphathi bezokuthengisa bavame ukudingwa. Azikho izikhundla zobuholi ozonikezwa kuwe. Kuyadumaza kancane, kodwa lokhu kuyinto evamile.
Endabeni yabalindi bezokuphepha, ayikho iphuzu ekulindeni ukukhula komsebenzi - lokho akunakwenzeka. Noma kunjalo, abasebenzi abanjalo banelisekile ngokubekwa umsebenzi. Kodwa uma unquma ukuthola umsebenzi njengomphathi wezokuthengisa, okungenani okungenani ukukhula komsebenzi kungalindelwa. Futhi-ke umsebenzi ekubuyekezweni "kwe-Letual" akutholi okwesabekayo kakhulu. Ngempela, ungakwazi "ukuvuthwa" kumphathi ophezulu. Futhi ube ngumholi walokhu noma lowo mnyango. Kodwa lokhu sekuphela kokukhula komsebenzi. Abanye badumala ukuthi ngeke kusebenze kuze kube "eziqongweni". Kodwa lokhu akusona isizathu sokunqaba ukusebenza enkampanini.
Vumela abasebenzi ababuyekezwayo "I-Letual" abayitholayo akuyona into engcono kakhulu ngokwemiso. Ngokusemthethweni, ngendlela efanayo nabancintisana abaningi. Abasebenzi abaningi bagcizelela ukuthi uzonikezwa ngokusemthethweni isonto elisebenzayo lesi-2/2 noma 5/2. Kodwa lokhu "kuphela ephepheni" kuphela.
Ukuzivocavoca kubonisa ukuthi kuzosebenza okuningi, kunzima futhi kuyinde. Isibonelo, uma umuntu engena ekushintsheni kwakhe, abaqalayo bangabangela ukufaka endaweni. Futhi konke lokhu ngaphandle kokukhokha okunye nokukhokhwa. Akuyona umzuzu omuhle kakhulu, akunjalo?
Okulandelayo yisikhathi somsebenzi. Ihlukahluka ezindaweni ezihlukene, kodwa ngokuvamile kaningi usuku lwamahora angu-6-8. Abantu abaningi bathi umsebenzi e-Letuale awunayo ngisho lapha. Ngempela, bonke abaphathi (ngaphandle kwabaningi) baphoqeleka ukusebenza ngokuqhubekayo isikhathi esengeziwe. Yiqiniso, angeke kube khona umbuzo wokukhokha okungeziwe komsebenzi. Ngakho lo mzuzwana uyakwazi ukuhlukanisa abantu abaningi emsebenzini.
Njengoba ungabona, le nethiwekhi ye-"L'Etoile" ayiyona ingozi. Ukubuyekezwa "kwe-Letual" mayelana nomsebenzi enkampanini akuzuzi okuhle kakhulu. Kodwa ukwahlulela ngephakethe lezenhlalo elinikeziwe, azikho izikhalazo ezikhethekile ezivela kubasebenzi. Ngokuvamile, isimo lapha singcono kunabancintisana.
Isibonelo, amaholide athembisiwe namaviki onke uzothola ngesikhathi. Yebo, kunokwenzeka ukuthi uzobizwa ukuthi uzosebenza futhi ubeke esikhundleni. Kodwa ungakwazi njalo ukulahla. Ikakhulu uma usebenza isikhathi eside enkampanini. Esikhathini sesikhathi, abasebenzi abasha nabo bakhululwa ngaphandle kwezinkinga.
Isibhedlela siyakhokhwa ngokugcwele nangesikhathi. Ikhefu lesidlo sasemini, kodwa, njengalokhu alukho. Phela, akusiyo imfihlo ukuthi izimonyo nezitolo zamakha amafutha zisebenza ngaphandle kwalo. Kodwa-ke, imizuzu engama-30 ungabeka eceleni i-snack egumbini lenkonzo. Vumelana kuphela nozakwabo abazoba nomthwalo wemithwalo yomnyango wakho ngalesi sikhathi.
Ukusebenza ekubuyekezweni "kwe-Letual" kwabasebenzi benhlobo engalungile ngokwephakethe lezenhlalakahle kuthola kuphela abesifazane abakhulelwe. Into ewukuthi abantu abanezingane ezincane noma labo abahlela ukuzithola esikhathini esizayo esiseduze banqikazi ukusebenza lapha. Akukho ziqinisekiso zokuthi uzokhokhelwa ikhefu lokubeletha. Njengoba umkhuba wabonisa, abesifazane abakhulelwe e-Letual bayaphoqeleka ngokweqile ukuba baphume emsebenzini. Noma bazothola, noma yiziphi izizathu, umlilo, noma bazokuphoqa ukuba ubhale isitatimende senkululeko yakho yokuzikhethela. Empeleni, lokhu okuhlukile kokuthuthukiswa kwemicimbi kwenzeka cishe yonke indawo. Ungamangali noma wesabe. Nasi isici esingavamile somqashi.
Iphuzu eliyinhloko elibangela imibono emibi engxenyeni yabasebenzi baseLetual isholo. Abaningi bathi likhokhwa ngesikhathi, kuyinhlangano enkulu. Kodwa ukwehluleka ohlelweni lokubalwa kwemali nakho kwanele.
Ngokuvamile, abasebenzi bayagcizelela ukuthi uzothenjiswa "umholo" omhlophe, futhi ophezulu-kusuka kuma-ruble angu-20 000. Kodwa "ephepheni" imiholo yakho izoba cishe 8-10 izinkulungwane. Umehluko lukhulu, akunjalo? Kuyinto engenakwenzeka ukuba usinde ezweni lanamuhla.
Imali engenayo yakho yonke izokwakhiwa kusukela kumaphesenti wokuthengisa, kanye nakubhajama. Ukubala kwabo, futhi, benza intukuthelo eminingi. Isonto ngalinye uzonikezwa uhlu lwezinto ezikhethekile. Ngokuthengiswa kwabo uzothola% ukuze uthole imali. Ukuthengiselana nezinye izimpahla zamaphrimiyamu kanye nezibonelelo angeke zithembeke. Ukuzivocavoca kubonisa ukuthi nge-scheme enjalo yeholo eliphakeme akudingekile ukuba nethemba. Ngakho cabanga ngokucophelela ukuthi kufanele uxhumane nale firm for career.
Umsebenzi "I-Letual" ibonisa izici zayo ngokugcwele ekufakeni izinhlawulo ezehlukene kanye nokuncishiswa. Mhlawumbe, okwamanje inkampani ithola izibuyekezo ezimbi kakhulu. Ungakwazi ukubhekana nokucubungula, isimo sengqondo esingalungile, ukungabi nokukhula komsebenzi kanye nemali ephansi. Kodwa ngezinkokhelo neze.
Into yukuthi "i-Letual" ikhonjiswe kuwo wonke futhi njalo. Awuthengisanga umkhiqizo "okhethekile"? - Kuhle. Uzofika esidlweni sakusihlwa, futhi umphathi ophezulu waphawula lokhu? - Kuhle. Ufuna ngempelasonto ngezindleko zakho? - Futhi uhle. Ngezinye izikhathi kufika ekungeneni kokungacabangi: ngokungahambi kahle kubheka iklayenti, ungamomotheka, ubheke "hhayi okusha" njalo njalo.
Ekupheleni kwenyanga, kusuka kuholo lakho, ngisho necebo elikhethekile, ngeke kube khona lutho olusele. Ngakho, ukuthola umsebenzi "ku-Letual", cabanga ngokucophelela, uyayidinga ngempela.
Njengoba ungabona, "I-Letual" iyinethiwekhi yokuhweba ethandwayo, enikeza abantu ezinye izinketho zomsebenzi. Kuphela nje inkampani iziphatha ngendlela enhle. Abasebenzi bakhe baqinisekisa: uma ulungele ukusebenza kanzima, futhi "unikeza 100%", khona-ke ungaphumelela lapha. Abantu bokuqala enkampanini abanakho okumele bakwenze.
Kunoma yikuphi, wonke umuntu wenza isinqumo sokugcina eyedwa. Manje uyazi zonke imithetho nezici ezingathonya ukukhetha. Cabanga ngokucophelela ngazo zonke izinzuzo nezindleko zenkampani, bese unquma ukuthi udinga ukusebenza lapha noma cha.
Imibhalo yokuqamba inkampani yezinkampani ezihlangene. Ukubhaliswa kwenkampani yokubambisana
Andrei Kozitsyn: biography, isithombe
Uyini lokudweba, lokucuketfwe, sitayela, isiqondiso
Ukuzisebenzisa kahle lesi sidakamizwa "Ballerina". Ukhula ngokumelene ukhula
Imithi abesifazane. Umuthi 'Djufaston "endometriosis